[Indawo yokuhlala yeNkamela] No. 1/2 iMetro ephindwe kabini|Iziko leSixeko|Chaoyang|Wanda Plaza|Isitalato sabahambi - I-Airbnb
[Indawo yokuhlala yeNkamela] No. 1/2 iMetro ephindwe kabini|Iziko leSixeko|Chaoyang|Wanda Plaza|Isitalato sabahambi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu宇阳Kyra
"Ukuba umhla okhethiweyo ubhukishwe ngokupheleleyo, ungacofa kumfanekiso wam weprofayile ukujonga olunye uluhlu♡"
※【Iindwendwe ezingakhange zihlawule idiphozithi kwi-intanethi, nceda uhlawule i-200 yuan kumnini-mhlaba ngaphandle kweintanethi】※
※【I-B&B yenkamela ineendlela ezi-4 ezahlukeneyo ze-B&B kwisakhiwo esinye, esinokuhlalisa amaqela abantu abangaphantsi kwe-16. Nceda udibane nomnini-mhlaba. 】※
Intle njengepesika yemithombo emithathu, kunye neQingsu njengechrysanthemum kwikwindla ezilithoba.
Igama lam ndinguZheng Yuyang Kyra, kwaye ndingumyili wangaphakathi ozimeleyo wasekhaya eNanning. Wamkelekile kwiCamel Homestay Chaoyang eyiNombolo yesi-5 yeVenkile. Zonke iindwendwe ezenza iodolo zinokufumana uHambo lweNanning, iSikhokelo sokutya, kunye neCamel Homestay Check-in Guide ngokukodwa. enikwa Camel Homestay., ke isikhokelo photo elungiselelwe ngokukodwa ngenxa zemimoya encinane!
Izibane ezithathu zikhanyisa umhlaba ngentlanzi edada emanzini, nto leyo ethetha ukuba abaqeshi abahlala kulo “bafana nentlanzi emanzini.” Kukho umzobo wentaba yegolide emacaleni omabini, okuthetha ukuba abaqeshi abahlala kuyo. kuba imisebenzi yabo. "Back to Jinshan"!
Ukuthatha amanzi njengemilo yawo kunye neentaba njengendalo yawo, igxininisa ukuhlalisana okuhambelanayo kwendalo kunye nabantu, ivumela abemi ukuba babe namava obomi bemibongo kunye nokupeyinta kwehlabathi phakathi kwamazulu, umhlaba kunye neentaba kunye namanzi.
[Isimbo] Indlu yamkele isimbo saseTshayina esikhanyayo, esisisitayela saseTshayina esamkelekileyo kubantu abatsha. "amava ezibonwayo" kwaye ayihlawuli ingqalelo "nkongomiso yokuphila" Ilishwa, baze bazabalazele ukudibanisa ezimbini ukwenza yokuhlala oko kumlungele ngokwenene kubantu abatsha ezidolophini.
[Ibhedi] Iibhedi ezimbini ezinobubanzi obuziimitha eziyi-1.8 kunye noomatrasi abatsha kraca belatex, imigca yesikwere ihambelana nohlaza lweavokhado, intliziyo ethambileyo nethambileyo phantsi kwenkangeleko eqolileyo nendilekileyo, ungawola umqamelo esandleni, ilizwe, lakudala. kunye nehlabathi, idlalwa Talk.
[Indawo yoLonwabo] Ukufumana imbeko kunye nocwangco lwendlu enkulu yaseTshayina, igumbi lokuhlala lisisikwere kwaye lihle, lihluthwe inkangeleko eqaqambileyo nebukekayo, kwaye lelo "kuchukunyiswa okuthambileyo" okwenza abantu babe noxolo ngokwasemzimbeni nasengqondweni. uqinisa unxibelelwano phakathi usapho kunye nodonga ezimhlophe inxalenye ephezulu ndawo projektha, apho usapho bahlale kunye babukele iinkqubo zabo abazithandayo.
[Itheyibhile] Ukutya kufana neoksijini. Akukho mida kwaye akukho zithintelo. Kufuneka ungene kwindawo yokutyela evulekileyo enenyathelo lokungena kwindawo yokutyela evulekileyo, isuphu kunye neebhiskithi ziya kuqalisa i-prelude enamandla, kunye nentlanzi enkulu kunye nenyama. kuya kuthoba ukudinwa kwemini.
【Indlu yangasese】 Amanzi ashushu iiyure ezingama-24 anikezelwa ngaphandle kokuphazamiseka.Indlu yangasese eyahlukileyo ixhotyiswe ngeshampu, ijeli yeshawa, iconditioner, isicoci sobuso, iitawuli kunye neebrashi zamazinyo ezilahlwayo, iikama, isepha, kunye nezixhobo zokukhathalela.
[Ikhitshi] Ivumba lobomi obonwabileyo lihlala liphuma ngokuzolileyo kwisuphu eswiti eshushu. Isicwangciso sombala esifutshane kunye nesisa, imigca egudileyo kwaye ekhululekile kunye nokugcinwa okuguquguqukayo kuvule indawo enkulu ngokwaneleyo yokubonisa iitalente zabo. Ukupheka simahla, kwaye iindwendwe kufuneka zizihlambe ngokwazo iimbiza nezitya.Igumbi lokuphekela linezikhenkcezisi, iimicrowaves, iimbiza zamanzi, ii-induction cookers kunye ne-rice cookers.Zininzi iimbiza kunye nezixhobo zokuphekwa lula nangaliphi na ixesha.
[Ucoceko] Zonke iipillowcases, iiduvet covers, amashiti, iitawuli, iitawuli zokuhlambela kunye nezinto ezilahlwayo zitshintshwa nganye nganye, kwaye zonke zicocwa ngesibulali-ntsholongwane.Ukongezelela, sisebenzisa izibane ezikhethekileyo zesibhedlele ze-ultraviolet ozone ukubulala iintsholongwane kwaye sihlale eluxolweni wena.
Abahlobo abakhulu kunye nabantwana bamkelekile ukuba bahlale. Umnini-ndlu uYuyang ngumhlobo wakho othembekileyo weNanning.
4.89 · Izimvo eziyi-121
Le ndawo ikwiSithili soRhwebo saseChaoyang. Indawo yokuhlala ikwimigangatho ephezulu yeLvdu Commercial Building. Kukho izinyusi. Isakhiwo sikhuseleke kakhulu. Kukho iilifti ezininzi zokuhamba lula. Iipaseji zibekwe esweni. Kukho iivenkile ezithengisa izinto eziluncedo. ubusuku nemini. nezitshixo Password kunye anti-nobusela iminatha baxhotyisiwe ngokupheleleyo. uyakwazi ahlale ngokukhululeka.. Iindawo ezingqonge uluntu zigqibelele, kwaye akukho mfuneko yokwazisa ukutya okuninzi neziselo.Kukho isitrato sokutya esithengiswayo kwisikhululo sikaloliwe, kwaye ukutya kubonakala kuyo yonke indawo kwisitalato sabahambi ngeenyawo.Ezantsi kukho izitrato ezithathu nezimbini iindawo. ithatha kuphela imizuzu eli-10 ukuya kwelo Zhongshan Road Food Street, kwaye iluncedo emnyango wesakhiwo. Stores, iivenkile kufuneka Wal-Mart, ezivenkileni eevenkile kufuphi Homestay zezi China World Trade Center, Wanda Plaza, yaseMzantsi commercial City, Xinchaoyang commercial Plaza, iibhanki ezikufuphi baba China Construction Bank, Bank of Communications, Industrial and commercial Bank, kunye nesibhedlele kufutshane Homestay yi Hospital People Kuqala kaThixo. i-Red Cross Hospital, imarike lwemifuno uye esitratweni amanzi kunye norhwebo intsimi.
Umbuki zindwendwe ngu- 宇阳Kyra
Ungancokola nam ukusuka ngo-8:00 kusasa ukuya ku-24:00 ngokuhlwa~
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nanning